Resadresaka ifanaovan'i Joanne Liebenberg: Ahoana ny fomba hanomezan'ny mpandihy matihanina fahalalahana hitety an'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Resadresaka ifanaovan'i Joanne Liebenberg: Ahoana ny fomba hanomezan'ny mpandihy matihanina fahalalahana hitety an'izao tontolo izao
Joanne Liebenberg dia mpanakanto dihy matihanina avy any Afrika atsimo ary ny asany dia nihaona an'izao tontolo izao. Ity phenom dihy ity dia milaza fa manana Dance izy fisaorana noho izany rehetra izany. Ny fiankinan'i Liebenberg dia nanjary ny asany ary ny asany dia nitondrany azy eran'izao tontolo izao. Tamin'ny resadresaka nifanaovana, ity Mpanakanto tsy manam-paharoa ity, dia manokatra sy mamaly fanontaniana momba ny fomba nanomezan'ny 'Dancing' azy fotoana hitetezana an'izao tontolo izao.
Ny asanao dia nitondra anao nanerana an'izao tontolo izao. Ankafizinao ve ny lafiny fitsangatsanganan'ny asanao sy ny fampisehoanaanao any amin'ny firenena maro samihafa?
Azo antoka! Te-hitety ny tontolontsika tsara tarehy foana aho ary nihalehibe dia nanangana lisitra toerana maro be izay tsy maintsy notsidihiko. Misaotra an'i Dance aho noho ny diako rehetra manerantany, izay misy firenena 20 sy tanàna maro. Sambatra aho niara-niasa tamin'ny choreographer iraisam-pirenena maro ary nahazo namana iraisam-pirenena maro nandritra ny diako, izay mitovy fientanam-po. Amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana any amin'ireo firenena samihafa ireo, ity dia nanokatra fotoana fandihizana maro hafa ho ahy ary nahazo fahalalàna bebe kokoa momba ny dihy koa aho. Manana fitiavana sy fanajana lehibe amin'ny asa-tanako aho!
Lazao aminay ny momba ny fifanarahana nifanaovana taminao tamin'ilay orinasan-tsambo fitaterana an-tsambo lehibe indrindra sy lehibe indrindra eran-tany, Royal Caribbean International?
Asa fandihizana nofinofy ity! Vao avy nahavita ny fifanarahana faharoa nataoko ho Featured Dancer miaraka amin'ny orinasa mandeha sy manao fampisehoana ho an'ny mpihaino manerantany. Izaho irery no Afrikana Tatsimo nahazo tolotra fifanarahana tamiko rehefa nanao audition ho azy ireo aho rehefa nandihy tao NYC. Tao amin'ny 'Radiance of the Seas' sy 'Voyager of the Seas', dia nanao fampisehoana tany amin'ireo firenena sy tanàna toa an'i Miami, Japan, Singapore, Hong Kong, China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Alaska, Canada, Hawaii, Australia aho. , Polynesia frantsay, Nouvelle Calédonie, Vanuatu, ary Nouvelle Zélande. Hawaii no toerana tiako hitsidihana hatreto, nanofinofy ny hivezivezy tany nandritra ny taona maro aho ary ny asako dia nahatonga izany ho zava-misy ho ahy. Tsy misy hetsika fialamboly lehibe kokoa eto an-tany noho ny Royal Caribbean, an-tanety na an-dranomasina ary tsapako fa manana tombony ho anisan'ity orinasa sangany ity aho, mandihy amin'ny talenta tsara indrindra manerantany.
Fampisehoana inona no nasongadinao talohan'ny niarahanao niasa tamin'ny Royal Caribbean International?
Talohan'ny diako tsy nampino niaraka tamin'ny Royal Caribbean International, dia nanao fampisehoana tamin'ny fampisehoana 'Andro iray hafa' amin'ny maha-Dancer Lead ahy ao amin'ny Teatra any Kalk Bay any Afrika Atsimo miaraka amin'ny Productions Followspot. Ity seho ity dia tena niavaka mba ho anjara, indrindra ny fahitana ny tarehiko amin'ny afisy navoaka manerana an'i Cape Town ho an'ilay seho. Ny 'biraoko' dia nijery ny ranomasina ary ny teatra dia teo afovoan'i Kalk Bay. Ity dia fiovana tsara tarehy ho ahy raha ny marina talohan'ity nandihizako tao anaty korontana tao New York City ity. Tany NYC, nanao fampisehoana tamin'ny Teatra Alvin Ailey Citigroup amin'ny Broadway Dance Center. Nanjary 'tovovavy poster' an'i BDC tany NYC koa aho.
Nahazo loka iraisam-pirenena maro koa ianao. Manova ny fahitanao ny fahaizanao mandihy ve ireo loka ireo?
Talohan'ny nahatongavan'i Dance ho asako dia nisolo tena ny fireneko, Afrika atsimo, nandritra ny 5 taona nifanesy aho. Izaho dia tany Allemagne tamin'ny Tompondaka Eran-tany tamin'ny World Showdance, Polonina tamin'ny World Ballet, Jazz ary Tompondaka Maoderina, Portugal ho an'ny The World Dance Week ary USA ho an'ny American Dance Awards. Tamin'ny fahazoana medaly volamena, volafotsy ary varahina ho an'ny fireneko dia nanaporofo ny fahaizako miavaka amin'ny dihy ary nampitombo ny fahatokisako ny fahaizako mandihy. Vao avy nitondra ahy tany amin'ny toerana rehetra ny dihy!
Ahoana no tianao hijanonana amin'ny fampiharana raha eo anelanelan'ny fitsangatsanganana sy fampisehoana ianao?
Ny dihy dia asa mampientanentana satria tsy fantatrao akory izay audition ho avy manaraka. Tokony ho vonona foana ianao ary mila mijanona eo an-tampon'ny lalao. Eo anelanelan'ny fifanarahana dihy lehibe sy fitsangatsanganana, I Perform, Choreograph ary Mampianatra miaraka amin'ireo orinasa samihafa any Afrika Atsimo toa ny Vole Ballet School sy DS Dance. Noho ny areti-mandringana manerantany dia tolona ho an'ny Artista io, saingy nanana ny tombony azoko ny nanao kilasy iraisam-pirenena tamin'ny Internet ary koa nampianatra sy nanao fampisehoana saika.
Aiza no antenainao fa hitarika anao manaraka eto amin'izao tontolo izao ny asanao amin'ny dihy?
Efa manana fifanarahana dihy roa ho avy nilahatra ho ahy any Amerika aho izay tena faly indrindra aho. Natolotra ahy ho 'spesialisan'ny dihy' eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena malaza, Orinasa Chace Dance any Orlando Florida izay hanehoako choreography ho an'ny orinasa ary hanao toy ny Soloist amin'ny fampirantiana, fampisehoana, kilasy ary atrikasa orinasa. Nomena fifanarahana nifanaovana tamina tranokala dihy sy fampisehoana zava-kanto efa niorina tsara aho, Center for Performing Arts Methuen any Massachusetts ho toy ny 'Dance Demonstrator' an'ny orinasa izay ankoatra ny fampisehoana choreography amin'ny karazana rehetra, dia hanao soloist ao amin'ny kilasy ao studio ary koa atrikasa ary ho Lead Dancer amin'ny faran'ny vanim-potoana ho avy dia fampirantiana manodidina ny faritr'i Massachusetts, miaina ary koa saika.
Inona ny zavatra mahaliana anao hafa ankoatry ny Travel and Dance?
Ankoatry ny fihirana sy ny fiakarana an-tsehatra izay andraisan'ny rehetra anjara amin'ny tontolon'ny fampisehoana, vao haingana aho dia lasa mpampianatra yoga voamarina sy voasoratra anarana ary mpiantoka sakafo mahavelona. Ireo fanamarinana sy traikefa nahafahana nanokatra varavarana vaovao ho ahy. Izy ireo koa dia manitatra izay azoko atolotra amin'ny maha-mpanakanto ahy. Izany no zava-nitranga rehefa nitantana ny fizarana media sosialy ho an'ny tranokala iray-style magazine aho iDiveblue nandritra ny fanidiana ny Covid-19 tany Afrika Atsimo. iDiveblue dia manome atiny manara-penitra manarona ny fitsangatsanganana, ny fanatanjahantena mampihetsi-po ary ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina. Ankoatr'izay, tiako ihany koa ny ranomasina, lomano, famakiana boky, tsindrin-tsakafo vegan, fanaovan-tsary, horonan-tsary ary izay zavatra mahaliana rehetra eo amin'ny natiora. Tsy mijanona eo izany - PADI Scuba Diver mahay aho, ary tiako ny milalao ukulele izay tsy nandao ahy mihitsy nandritra ny diako eran-tany.
Inona ny toro-hevitra tianao hozaraina amin'ireo mpandihy maniry fatratra?
Ny torohevitro dia ny hisian'ny nofinofinao sy ny tanjonao eo aminao - matokia izany dingana izany, izay ho tonga ho anao. Ny fonao dia hanosika ny filanao hanatratra tanjona tadiavinao hiasa. Aza mitsahatra mino fa mahavita azy ireo ianao. Mijanona ho manetry tena ary miasa tsy an-kijanona amin'ny fitiavanao rehetra hanohana anao. Ny tena zava-dehibe dia mankafiza ny dia satria ampahany amin'ny fitomboana izay hahatonga anao amin'ny toerana tokony hisy anao.
Joanne Liebenberg dia porofo fa afaka mitazona kariera Dance ambony ianao ary mbola mitety an'izao tontolo izao. Artists and Athletes, miaraka amin'ny fifehezan-tena marina, dia azo entanina sy harahin'ny ohatra. Manaporofo ny maha-mpanakanto manan-talenta azy, ny finiavan'i Liebenberg dia namorona asa mahomby ho azy ary nahatanteraka ny faniriany hitety sy hiaina an'izao tontolo izao. Miharihary fa ny fanetren-tenany, ny fahaizany mitondra ary ny talentany dia hampiorina azy any amin'ny toerana avo vaovao!
Loharano: Dance Roots Media